FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA KAABAJKA KOHLRABI - NOOCYO KAABASH
Ugu Weyn Ee Noocyo kaabash
Bamka faytamiin, ama faa'iidooyinka kohlrabi
Dhanka yurub, Kohlrabi waa la jecel yahay loona qadariyaa - waa wax aan la qabin oo daryeelkana waafaqsan xaaladaha cimilada. Tastes ee tayada si weyn uga badan yahay kaabajka cad, iyo guryaha faa'iido leh ma ka xun yihiin broccoli. Maxaa kale waa kohlrabi cajiib leh, maxay faa'iidooyinka ay bixin karaan mana waxyeelayn doonaan isticmaalka?
Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada ee kaabajka kohlrabi
Kohlrabi waa khudradda aan caadiga ahayn. Xaqiiqdii, waa weel madow oo leh asliga ah la cuni karo qaabka kubbada. Asalkiisu waa mid casri ah, oo jilicsan, wuxuu leeyahay mid qurux badan, oo u egtahay qof qaraabo ah oo dhadhan cad oo dhadhan, oo aan lahayn qadhaadh. Kohlrabi waxay yeelan kartaa midab khafiif ah ama midab madow. Kala duwanaanta noocaan oo ah kaabajka waa badeecad cunto oo lagama maarmaanka ah oo ku jirta potassium, fructose, fiitamiin A, B, B2, PP, glucose, ascorbic acid. A Fiirinta fitamiin C xitaa ka horeysa liinta iyo liinta.
Ma taqaanaa? Kohlrabi's concentration of vitamin C wuxuu siinayaa magac ka duwan - "liinta waqooyiga".
Qiimaha nafaqada ee 100 g oo ah kohlrabi caanuhu waa 42 kcal, iyo faa'iidada kaabashan (oo ah 100 g oo ah qashir) ayaa laga arki karaa miiska:
Qiimaha nafaqada, naxwe Vitamiin, milligaraam Macruufiyeyaasha, milligaraamyada Raadi walxaha, milligaraam
xayawaanka 1,7 carotene beta 6,1 calcium (Ca) 46 Birta (Fe) 0,6
dufanka 0,1 Faytamiin A (oo loo yaqaan 'retinol equivalent') 0,017 magnesium (Mg) 30 zinc (Zn) 0,03
carbohydrates 2,6 fitamiin B1 (thiamine) 0,06 sodium (Na) 10 naxaas (cu) 0,129
fiyuusta cuntada 3,6 vitamin B2 (lactoflavin, riboflavin) 0,05 potassium (K) 370 manganese (Mn) 0,139
ash 1 fitamiin B5 (pantothenic acid) 0,165 fosoorka (P) 46 Selenium (Se) 0,0007
biyaha 86,2 fitamiin B6 (pyridoxine) 0,2 Sulfur (S) 15 iodiin 0,0002
di- iyo monosaccharides 2,6 fitamiin B9 (folic acid) 18,5 molybdenum (Mo) 0,001
asiidh dufan oo buuxa 0,013 fitamiin c 50 fluorine (F) 0,0014
asiidh dufan ah oo aan la karin 0,01 fitamiin E (TE) 0,48
Nidaamyada dufanku ku badan yahay 0,01 fitamiin k (phylloquinone) 0,0001
acids organic 0,1 fitamiin PP (niacin) 1,2
istaarijka 0,5 fitamiin b4 (cholin) 12,3
Shaki la'aan, kaabash kasta waa faa'iido leh. Gaar ahaan waxaa lagula taliyaa in ay u isticmaasho carruurta iyo hooyooyinka uurka leh. Laakiin ma kaabajka Kohlrabi keli ah oo keliya ma leh wax faa'iido leh, maxay faa'iido u keenaysaa oo waxyeelleyn kartaa?
Ma taqaanaa? Magaca Kohlrabi wuxuu ku bilaabmaa Jarmalka, waxaana loo tarjumay "Kaabashka Cagaaran" (kohl rübe).
Qodobbada waxtarka leh ee kohlrabi
Kohlrabi wuxuu saameyn ku yeeshay habka dheef-shiidka, wuxuu xasiliyaa dheef-shiid kiimikaad, wuxuu caadi u yahay beerka, dhuxusha, nidaamka dheefshiidka, nadiifiyaa sunta iyo sunta. Sababtoo ah diirada sare ee potassium waxay ka caawisaa in laga takhaluso dheecaanka xad-dhaafka ah, iyo fiber-ka waxay ka hortagtaa dhigitaanka kolestaroolka derbiyada xargaha. Waxay noqon kartaa aalad wax ku ool ah oo looga hortago xanuunka atherosclerosis. Waxay ka caawisaa Kohlrabi inay sidoo kale hoos u dhigto cadaadiska dhiigga iyo soo celinta nidaamka dareenka.
Qodobada faa'iidada leh ee kohlrabi waxaa loo isticmaalaa daaweyn kale. Tusaale ahaan, decoction ee dushooda iyo stebleplod ee kaabashan waxaa lagu talinayaa in ay codsadaan qaaxada iyo neefta.
Waxaa intaa dheer, guryaha faa'iidada leh waxaa lagu xafidaa qaab kasta: cusub (waxay caawisaa xoojinta cirridka iyo ilkaha), la kariyey, la dubay, loona kariyay. Casiirka kohlrabi ee cuujinta cusub ayaa hoos u dhigaya qufaca, xabeeb, wuxuu ka tirtiraa geedi socodka bararka ee afka qalalan, wuxuu ka caawiyaa dhiig-yaraanta.
Waa muhiim! Waxaa macquul ah in la cuno kohlrabi yaryar iyo yaryar oo cunto ah - waa kuwo jilicsan oo casiir leh.
Dhammaan sifooyinkaa tayada leh waxay ka sameeyaan kohlrabi qaybta ugu muhiimsan ee ku jirta liiska dadka hoggaamiya hab nololeedka habboon oo raadinaya inay cunaan faa'iidooyinka caafimaadka ugu sarreeya.
Dadka degan meel kasta oo cimilada ah ayaa lagu qancin karaa faa'iido u lahaanshaha kaabajka - xitaa gobollada waqooyiga ee kohlrab ma aha oo keliya koritaanka, laakiin sidoo kale waa soo baxdaa. Iyo iska caabinta cayayaanka iyo cuduro badan ayaa loo saari karaa mudnaanta kale ee khudraddaas. Kohlrabi ayaa loo isticmaalaa wax soo saarka kiriimyada is qurxinta - vitamiin K iyo E dib u soo baxa unugyada, kordhiya maqaarka maqaarka, cusboonaysiin iyo dib u soo nooleynta. Kohlrabi waxaa lagu daraa maaskaro guri si loo hagaajiyo isku dhafka oo laga takhaluso da'da da'da, iyo duug ku salaysan kaabajkani wuxuu yareyn doonaa maqaarka lafdhabarta iyo hagaajinta dhismaha maqaarka guud ahaan.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku darto shubka maaskaro leh kohlrabi, waxaad ka takhalusi kartaa indho-furid waaweyn.
Faa'iidooyinka kohlrabi ee jirka ayaa sidoo kale ku jira hantida anticancer. Seleniyum iyo walxaha sulfur-ku jira ee ka mid ah kaabashadan, waxay ka hortagaan horumarinta kansarka malawadka ee mindhicirka iyo malawadka, laabta, sanbabada iyo nidaamka kaadida. Sidaa darteed, Kohlrabi waxaa lagu talinayaa in ay isticmaasho kahortaga kansarka.
Dhibaatooyinka iyo ka hortagga isticmaalka
Qeexitaanka sifooyinka wanaagsan ee kohlrabi, waa in lagu dhajiyaa maskaxda in kiniinkan cusub uu noqon karo mid waxyeello leh, inkastoo ay tahay in la ogaado in ay jiraan waxyaabo sidaas oo kale ah iyo faa'iido badan.
Mabnuucyada gaasaska gaarka ah ee isticmaalka kohlrabi ma jiro. Laakiin sababtoo ah awoodda kor loogu qaado kiimikada iyo kaadida caloosha Kaabashka laguma talinayo in la isticmaalo marka:
Garaacsiyada leh acidity kor ka caadiga ah;
jawaab celin xun oo ku saabsan sheyga, dulqaad shakhsi ahaaneed.
Waa muhiim! Dadka qaba miyir la'aanta, kohlrabi waa in la isticmaalaa bariis ama xididdo.
Kaabashka Kohlrabi ma faa'iidi doono haddii ay ku koraan ee lagu koriyo ah. Cagaarka noocan oo kale ah wuxuu inta badan ku jiraa Nitrates, taas oo saameyn ku yeelata jirka.
Cunto daawo oo la isticmaalayo kaabash Kohlrabi
Kohlrabi waa raad dhab ah oo loogu talagalay dadka cayilan. Isticmaalkeedu wuxuu dejiyaa dheef-shiid kiimikaaduna wuxuu u oggol yahay ma aha inuu miisaanka dhinto oo keliya, laakiin sidoo kale inuu dhameeyo natiijadan muddo dheer.
Si loo soo saaro faa'idada ugu badan ee kaabajka ah ee aan waxyeello u geysan, Halkan waxaa ah cuntooyinka qaar leh bogsashada guryaha:
Isku qas 100 ml oo cabitaanka kaabajka leh 100 ml caano diiran, shaaha oo malab ah iyo 0.5 qaado oo ah cabitaanka basasha. Cab 2 tbsp. qaaddo 6 jeer maalintii astaamaha ugu horreeya ee qabow.
Kohlrabi juice isku dhafay biyo ah 1: 1. Gargle 4-6 jeer maalintii maalinta loogu talagalay baranbarada iyo laryngitis.
Kohlrabi (1 kg) shabaggeedii hayso weyn, ku shub hal litir oo biyo ah karkaraya oo ka tag. Ka dib 30 daqiiqo, tuujin iyo cadaadis, ku dar 1 tbsp. beedka laga bilaabo sharoobada rosehip, 2 qaado oo ah chamorus licorice iyo 0.5 qaado oo khudradda toon ah. Cabso markaad qufacdo 200 ml qaab kuleyl ah.
Faa'iidooyinka kiniinkan loogu talagalay jidhka bini'aadamka ayaa badanaa la qiimeeyaa. Si kastaba ha ahaatee, casiirkeedu wuxuu xitaa caawiyaa xitaa rhinitis markii uu kuusku geliyay sanka oo dhan 5 ml. Nidaamka waxaa lagu celiyaa laba jeer maalintii inta lagu jiro usbuuca. Ka hortagga waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho habkan 2 jeer sanadkiiba.
Si looga hortago caloosha, waxaad u baahan tahay inaad 100 litar oo salaar ah ku dhajisid kaabajka cusub, oo aad la socoto saliida aan saliid lahayn, maalin walba.
Kaabashka Kohlrabi ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona caloosha oo dheeraaday. Shabaggiisa 300 g oo ah kaabajka iyo tuujin. Cake qaado 2-3 qaado 4 jeer maalintii, cab cabitaan ka hor wakhtiga jiifka. Muddada daaweynta waa 14 maalmood.
Si looga hortago kansar waxay qaadataa faleebo kalluunka ah. 100 g oo dushooda ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya iyo saacad nus saac ka dib. Iska ilaali galiyey 200 ml oo casiir ah kohlrabi. Cab 150 ml saddex jeer maalintii saacad ka hor cunidda 3 toddobaad. Ka-hortagga waxaa lagula talinayaa inay dhacdo 2 jeer sanadkii.
Kohlrabi grate, 200 ml ee soo go'ay ballan ku shub 300 ml oo saliidda khudradda cagaaran oo ku rid barkadda biyaha 30 daqiiqo. Ka qaad kuleyl, ka tag saacad iyo daadi. Halabuurka soo baxay ayaa la qaadaa ka dib markii cunto ku jirta 2-3 qaado maalintii. Cuntadan waxaa loo isticmaalaa in looga hortago kansarka laba jeer sannadkii 4 toddobaad.
Casiir Kohlrabi (4 qaybood) ayaa lagu qasan yahay cabitaanka casiirka cad (3 qaybood), ginger (1 qayb) iyo dhir (1 qayb). Cabi ilaa nus saac cuntada ka hor qaado 3 qaado maalintii. Ka-hortagga noocan ah ee kansarka waxaa lagula talinayaa in la sameeyo 2 toddobaad laba jeer sannadkii, beddelidda casiirka cadaan iyo cadaan cas.
Ogaanshaha faa'idooyinka kaabajka, ma cabsan kartid hypertension iyo atherosclerosis. Si arrintan loo sameeyo, maalin kasta waxaad u baahan tahay inaad cunto 300 g oo ah kohlrabi dufan leh, oo lagu qasay 200 g oo tufaax ah. Koorsada ka-hortagga - 14 maalmood. Isticmaal 2-4 goor sanadkii.
Waxa kale oo ay faa'iido u tahay ka hortagga ischemia wadnaha si loo cabo 50 ml oo casiir ah kohlrabi 3-4 jeer maalintii. Koorsadu waa 4 asbuuc, marar 2 jeer sanadkii.
Sida aad u arki karto, kaabajka cusub ee Kohlrabi waa mid aan awood u lahayn inuu keeno waxyeelo oo uu keeno waxtarka keliya. Sidaas awgeed, waxay u qalantaa in ay qaadato meel ku jirta cuntadaada - isticmaalka habaysan ayaa si weyn u bogsiinaya jirka.
Cuntada dib udajinta Dajinta iyo daryeelka ubax ka dib beerashada
Ma dhibco qarsoodi ah ee caleemaha geranium khatarta ah iyo sida looga takhaluso iyaga?
Arjiga boric acid ee dalka: sida loo takhaluso quraanjada beerta
Waa maxay magaca dumarka ah ee dumarka iyo sida ay uga duwan tahay ragga
Qoomamo Faafidda in boodada - dhaxalka keliya eyda iyo bisadaha. Si kastaba ha ahaatee, soo bixiyey by xayawaanka guriga, cayayaanka waxay sababi kartaa dhibaatooyinka arrin halis ah - iyo gaar ahaan carruurta. Sidaa darteed waxaan fahmi doonaa marka qaniinyada qaniinyada ay khatar u yihiin carruurta. Maxay khatartu u cararaysaa caruur badan oo qaangaar ah? Read More
Shuruudaha marka la beerayo yaanyada geedo ee bisha Maarso iyo habka ay ku xirantahay
Astaamaha iyo sharaxaadda kala duwan ee yaanyada Gina: beerista iyo xakamaynta cayayaanka, sawirta yaanyo iyo faa'iidooyin kala duwan
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo kaabash 2019